XOG: DF Somalia Wasiiro ka tirsan oo Kenya u fududeeyay in Badeena ay qaadato – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
XOG: DF Somalia Wasiiro ka tirsan oo Kenya u fududeeyay in Badeena ay qaadato
1st July 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.cm-Sida lagau qoray Business daily ayaa lagu sheegay in labada dal ee Somalia iyo Kenya hada ku heshiiyeen in dowlada Somalia dacwada ka laabato Khilaafka dhanka bada isla markaana lagu xaliyo wadahadal.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray in wasiirka arimaha dibada ee Kenya Amina Mohamed baarlamaanka Kenya ku wargelisay in dowlada Somalia ogolaatay in khilaafka wadahadal lagu xaliyo.
Si kastaba khilaafka ayaa salka ku haya lahaanshaha iyo dalka xaqa uleh soo saarida iyo ka faaidaysiga shidaal iyo gaas la sheegay inuu ceegaago badweynta Indiya(indian ocean) oo dhacda xuduuda dhanka badda ee labada dal.
Dowlada Somalia ayaa ku doodaysa in xuduuda baddo ay noqoto mid ku jaan go’an xuduuda dhanka dhulka ee labada dal(dhigta xadka badda waa koonfur bari oo gudub ah) halka Kenya ay ku doodayso in xariiqda xadka ee labada dal aysan suuragal ah in looga qiyaas qaato xadka dhulka sidaas darteedna loo leexiyo dhanka bari oo toos ah.
Ugu danbeyntii DF Somalia ayaanan wali ka hadlin warkan sheegaya in iyada ay ka laabatay dacwadii ay u gudbisay QM ee ku aadaneyd xadka kala qeybiya Badda Somalia iyo tan Kenya.
Cabdiqeybdiid: ” Maamulka Galmudug Caqabad kuma ah Dariskiisa